ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပြုအမူ | USAHello ထံမှယဉ်ကျေးမှုအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပြုအမူအရာများစွာကိုဆိုလိုတယ်. ဒါဟာအကြောင်းပြောဆိုရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းအရာများပါဝင်သည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဝကိုဆိုလိုသည်, သင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်, နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး. ဘယ်လိုလူများ USA တွင်မိမိတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအသက်တာ၌ပြုမူဘူး? စင်ကြယ်သောတည်းခိုအကြောင်းကိုလေ့လာပါ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး, နှင့်စွဲ.
စင်ကြယ်သောတည်းခိုအမေရိကန်များအလွန်အရေးကြီးပါသည်. အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားနေ့တိုင်းရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးယူ. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဆံပင်ဆေးကြောဖို့၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုနှင့်ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုဆေးကြောဖို့ဆပ်ပြာကိုသုံးပါ. ၎င်းတို့၏ကြည့်တောက်ပစေရန်တချို့ကအသုံးပြုမှုအေးစက်. သူတို့ကငျြ့သုံးပြီးနောက်လူအတော်များများလက်ျာဘက်ရေချိုး. အမေရိကန်တွေချွေးများ၏အနံ့ကိုကြိုက်ကြဘူးဒါသူတို့ချွေးနှင့်အနံ့ကိုရပ်တန့်ဖို့သူတို့ရဲ့ underarms အပေါ် deodorant ထား.
စင်ကြယ်သောနေအိမ်များအမေရိကန်တွေရန်အရေးကြီးပါသည်များမှာ, ဒါပေမယ့်လူအများစုနေ့တိုင်းသန့်ရှင်းရေးမရ. ဧည့်သည်များလာမယ့်အခါ, သူတို့သည်အိမ်များသန့်ရှင်းသပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်. အမေရိကန်တွေသန့်ရှင်းရေးနှင့်သူတို့ကိုကူညီဖို့ပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်လေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေးကိုသုံးပါ. သူတို့တစ်တွေအိမ်ထဲသို့ရောက်လာသောအခါအများစုကအမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖိနပ်ကိုချွတ်ယူကြဘူး. တချို့ကလုပ်ပေး, သူတို့ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်စေခြင်းငှါ. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦး၏အိမျ၌အဘယ်သို့ပြုရမည်သေချာမသိကြပါလျှင်, မေးမြန်းဖို့အဆင်ပြေသည်.
ချိန်းတွေ့တဲ့ရင်ခုန်စရာလမ်းအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနေသည်. အမှုအရာအတူတူလုပျခြိနျးတှေ့နေသောပြည်သူ့, ထိုကဲ့သို့သောညစာသွားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်သွားအဖြစ်. သငျသညျရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုယူလိုလျှင်, သူတို့ကိုသင်ဖိတ်ခေါ်သင့်တယ်. တယ်ဆိုရင်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ, သငျသညျ၏နှစ်ခုရှိရာသွားပါရန်နှင့်ဘာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်.
ရက်စွဲကိုတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်. အလုပ်မှာသငျသညျမိတျဆှမြေားဖွငျ့မိတ်ဆက်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ. သငျသညျအလုပျမှာတစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကြပါလျှင်, သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှင်အားပြောပြရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. စမတ်ဖုန်းများအပေါ်ချိန်းတွေ့ app များကိုလူငယ်များနှင့်အတူပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာကြပြီ. သင်တစ်ဦး app ကို download နှင့်ရက်စွဲမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေသောအခြားလူဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျ.
အမေရိကန်တွေသူတို့ချိန်းတွေ့ကြတဲ့သူကိုရွေးချယ်ပါ. ၎င်းတို့၏မိဘများကသူတို့ကိုအကြံဉာဏ်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ချိန်းတွေ့ကြသို့မဟုတ်လက်ထပ်မည်သူဆုံးဖြတ်ကြဘူး.
သူတို့ငယ်ရွယ်အခါအမေရိကန်တွေအားလုံးလက်ထပ်မရကြဘူး. သူတို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုလက်ထပ်ဖို့ရှာတွေ့ယောက်ျားမိန်းမတို့ရှေ့သို့များစွာသောလူချိန်းတွေ့ကြပေမည်. ဒါဟာကွာရှင်းသို့မဟုတ်တစ်ဖက်ဒသေသောနောက်ယနေ့အထိသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် USA တွင်ကိုလည်းဘုံဖြစ်ပါသည်.
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ကိုင်နေသူများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်မှုယူ. USA တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှင့်အတူလူများ၏ထက်ဝက်ခန့်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြ. အမျိုးသမီးများမကြာခဏ USA တွင်ယောက်ျားထက်လျော့နည်းပေးဆောင်နေကြ.
တိုင်းမိသားစုနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည်. သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့်အဘိုးအဘွားအများကြီးလျော့နည်း USA တွင်၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူအသက်ရှင်နေထိုင်ဖွယ်ရှိသည်အခြားနိုင်ငံများတွင်ထက်များမှာ. မိသားစုများမှာလည်းနည်းပါးလာကလေး. USA တွင်အချို့လူများကအချိန်ကလေးအားလုံးရှိသည်မဟုတ်ရှေးခယျြ. ကျေးလက်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေမြို့ကြီးတွေမှာလူတွေထက်ပိုကလေးများရှိစေခြင်းငှါ. သူတို့ဟာမကြာခဏလျော့နည်းခေတ်သစ်လူနေမှုရှိ, လွန်း. ဒါပေမယ့်ပင်ရိုးရာအိမ်ထောင်စုအတွက်, အမျိုးသမီးအများစုအလုပ်.
ဆေးလိပ်မဆိုအများပြည်သူသောနေရာများအတွက်ခွင့်မပြုပါ, အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်အပါအဝင်. သငျသညျဖွစျရမညျ 20 ခြေဘဝါးကွယ်ပျောက်အများပြည်သူအဆောက်အဦကနေမီးခိုးဖို့. ကားတစ်စီးသို့မဟုတ် home မီးခိုးကဲ့သို့အနံ့လျှင်အများစုကအမေရိကန်များကမကြိုက်ကြဘူး.
အမေရိကန်တွေဆေးလိပ်အန္တရာယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏. အရည်နီကိုတင်းကိုမီးရှို့ကြောင်းဒါကြောင့်အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်လူကြိုက်များ. ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသင်၏ကျန်းမာရေးအဘို့အစွဲလမ်းနှင့်ဆိုးများမှာ.
ဆေးရွက်ကြီးဝါးအခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံအချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင်လူကြိုက်များနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလျှာကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်, သွားဖုံး, နှင့်လည်ချောင်း. သငျသညျဖြစ်ရန်ရှိသည် 18 အားလုံးဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များဝယ်ယူရန်.
အရက်သောက်သုံးခြင်းကို USA အတွက်အလွန်ဘုံဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်. အမေရိကန်တွေစပျစ်ရည်ကိုမသောက်ရ, ဘီယာ, နှင့်အရက်များ (ထိုကဲ့သို့သောဝီစကီနှင့်ဗော့ဒ်ကာအဖြစ်အချိုရည်). သငျသညျအရက်ကိုမသောက်ချင်ဘူးဆိုရငျ, အဘယ်သူမျှမပြောပါသို့မဟုတ်ရေအဘို့အမေးရန်ဒဏ်ငွေက. လူအများစုဟာစိတ်ဆိုးဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သင်ဖိအားပေးမည်မဟုတ်. သူတို့ပြုလျှင်, နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောပါ.
သငျသညျမူးယစ်ဆေးသောက်သုံးသို့မဟုတ်သုံးပြီးအခါကားမောင်းအန္တရာယ်နှင့်တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်. သင်တို့ကိုဘမ်းရခဲ့လျှင်, သငျသညျထောင်ထဲကိုသွားပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်းရှေ့နေများနှင့်ပေးဆောင်ဒဏ်ငွေအပေါ်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏လိုင်စင်ကိုယူသှားရလိမျ့မညျ. သင်ပင်အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းနှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မယ်.
USA တွင်, ဝေါဟာရ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဆေးဝါးအဖြစ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဆိုလိုသည်. over-the-counter မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသင်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ဆေးညွှန်းမပါဘဲဝယ်နိုင်ကြောင်းဥပဒေရေးရာဆေးဝါးများနေကြသည်များမှာ. ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများသင်တစ်ဦးမပါဘဲမဝယ်နိုင်သောဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးညွှန်း. သငျသညျမညျသူမဆိုနှင့်အတူဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမျှဝေမထားသင့်. သင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဆေးညွှန်းဆေးဝါးများယူပြီးလည်းတရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်. မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်နှင့်ရဲတွေနဲ့ဒုက္ခ၌သငျရနိုငျ.
ဆေးခြောက် (ထို့အပြင်အိုးသို့မဟုတ်ပေါင်းပင်ကိုခေါ်) အချို့သောပြည်နယ်များအတွက်ဥပဒေရေးရာကြောင်းမူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာလူတွေကိုဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်စားသောအပင်တစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်. အချို့လူများကကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူကူညီပေးဖို့အသုံးပြုရန်. အခြားလူများကလူတွေကိုအရက်မသောက်ရလမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်: သူတို့က effect ကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရှိပါတယ်. တိုင်းပြည်နယ်ဆေးခြောက်နှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်. အချို့သောပြည်နယ်များရှိ, သင်ကအသုံးပြုထောင်ထဲကိုသွားနိုင်ပါတယ်. အခြားသူတွေအတွက်, ထိုသို့ ဆေးခြောက်သုံးစွဲဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာ.
အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ USA တွင်အလွန်ဆိုးရွားသောပြဿနာဖြစ်ပါသည်. စွဲလမ်းသငျသညျဆေးလိပ်သောက်ကိုရပ်တန့်မပေးနိုငျခွငျးကိုဆိုလိုသ, အရက်သောက်, နှင့်မူးယစ်ဆေးသုံးပြီး, သငျသညျခငျြသို့မဟုတ်လျှင်တောင်မှသူတို့သင်နေမကောင်းလုပ်နေပါတယ်. သင်သည်ထိုစွဲလမ်းသငျသညျကိုခစျြသောလူနာကျင်သို့မဟုတ်သင်အလုပ်ကိုမှာဒုက္ခရှိသည်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းငှါ,. ရပ်တန့်အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, သင်မူကားအကူအညီရနိုင်. ဖုန်းဖြင့်အခမဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရရန်, ယင်းကိုပဌနာ အမျိုးသားပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးတိုင်ကြားမှု. သင်လုပ်နိုင်သည် ထို့အပြင်ရှာဖွေ FindHello သငျသညျအနီးအကူအညီတောင်း. သင့်ရဲ့တည်နေရာသို့မဟုတ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်. ထိုအခါရှေးခယျြ “ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး” အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွဲအရင်းအမြစ်များကိုရှာ.
သင့်ရဲ့မွို့တှငျန်ဆောင်မှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များရှာဖွေရန် FindHello ကိုသုံးပါ.